ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုမည်သို့ရှာဖွေ၊ ရှာဖွေ၊ | Martech Zone
ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်အားမကြာခဏမတိုက်တွန်းပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်မှောက်ခေတ်လိုအပ်သောမမြင်နိုင်သောကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်စရာများကြောင့် - အဓိကအားဖြင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုရေးကောင်းမွန်မှုကိုအဓိကထားသည်။ ငါဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည် CMS ရွေးနည်း ငါနှင့်အတူငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများမှသူတို့ကိုပြသနေဆဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တည်ဆောက်ရန်သွေးဆောင်နေကြသည်။
သို့သော်စိတ်တိုင်းကျပလက်ဖောင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေအနေများလုံးဝရှိသည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားရှာဖွေရေးနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်၎င်းတို့၏ဆိုဒ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်အားတွန်းအားပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ အခြေခံလိုအပ်ချက်သုံးခုရှိသည်။
robots.txt ဖိုင် - robots.txt ဖိုင်သည်ဆိုက်၏ပင်ရင်းလမ်းညွှန်တွင်တွေ့ရသည့်ရိုးရိုးစာသားဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်သူတို့ထည့်သွင်းရန်နှင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်မှထုတ်ပယ်ရန်ပြောထားသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကဖိုင်အတွင်းရှိ XML sitemap လမ်းကြောင်းကိုသင်ထည့်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒီမှာငါ့စက်၏ bot သည် bot များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်၏ site ကိုတွားသွားစေပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ XML sitemap သို့လမ်းညွှန်ပေးသည်။
XML Sitemap ဆိုတာဘာလဲ။
XML ကိုမြေပုံအညွှန်း - HTML သည် browser တစ်ခုတွင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ကဲ့သို့ပင် XML ကိုပရိုဂရမ်နည်းများဖြင့်အစာကြေရန်ရေးသားခဲ့သည်။ XML sitemap သည်အခြေခံအားဖြင့်သင်၏ site နှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုဖော်ပြသည့်အခါစာမျက်နှာတိုင်း၏ဇယားဖြစ်သည်။ XML Sitemap သည် daisy-chained ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် XML Sitemap တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဆိုဒ်၏အစိတ်အပိုင်းများကို (FAQs, စာမျက်နှာများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်) ယုတ္တိနည်းကျ စုစည်း၍ ဖြိုဖျက်လိုလျှင်၎င်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် Sitemaps သို့ပြိုကွဲသွားလျှင်ကောင်းပေသည်။
Sitemaps သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာသင်မည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်သင်နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်သည်ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုထိထိရောက်ရောက်အသိပေးနိုင်သည်။ သင်၏ site သို့သွားသည့်အခါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် sitemap နှင့်အတိုအထွာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိပဲထိရောက်မှုမရှိပါ။
XML Sitemap မပါပဲသင်သည်သင်၏စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုဘယ်တော့မှမစွန့်စားပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ကုန်ပစ္စည်းတင်ရန်စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုရှိပါကအတွင်းနှင့်အပြင်ကိုဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ Google ကဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါ။ လင့်ခ်တစ်ခုကိုမတွေ့မချင်းသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိတော့မည်မဟုတ်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများအား၎င်းတို့အတွက်ကော်ဇောနီကိုထုတ်ပေးနိုင်စေသည်။
ဂူဂဲလ်ကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်ပြင်ပ (သို့) အတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှုကိုတွေ့ရှိသည်။
ဂူဂဲလ်သည်ထိုစာမျက်နှာကိုရည်ညွှန်းပြီး၎င်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ရည်ညွှန်းထားသော link ၏ site ၏အကြောင်းအရာနှင့်အရည်အသွေးအရအဆင့်သတ်မှတ်သည်။
XML Sitemap တစ်ခုဖြင့်သင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမွမ်းမံခြင်းများကိုအခွင့်အရေးမပေးတော့ပါ။ များလွန်းသော developer များက ၄ င်းတို့ကိုထိခိုက်စေသည့် shortcut များပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ သူတို့ကတူညီတဲ့ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာကို site တစ်ခုလုံးတွင်ထုတ်ဝေသည်၊ စာမျက်နှာသတင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ သူတို့သည်စာမျက်နှာတိုင်းတွင်တူညီသောရက်စွဲများနှင့်အတူ sitemap ကိုထုတ်ဝေသည် (သို့မဟုတ်သူတို့အားလုံးသည်စာမျက်နှာတစ်ခုမှမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်သောအခါတွင်အသစ်ပြန်လည်)၊ သူတို့ကသူတို့ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်မချရသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုတန်းစီပေးသည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုလုံးလုံးလျားလျားလောင်ကျွမ်းစေတာတော့…ဒါကြောင့်သတင်းအချက်အလက်အသစ်ထုတ်ဝေတာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကမသိဘူး။
Metadata ဆိုတာဘာလဲ။ Microdata? ချမ်းသာသောအတတ်ပညာများ?
ချမ်းသာသောအတိုအထွာများကို microdata ကိုသေချာစွာ tag လုပ်သည် ၎င်းသည်ကြည့်ရှုသူမှဝှက်ထားသော်လည်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ (သို့) ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စာမျက်နှာတွင်မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းကို metadata အဖြစ်လူသိများသည်။ ဂူဂဲလ်သည်လိုက်နာသည် Schema.org ဓာတ်ပုံများ၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ ဖော်ပြချက်များ၊ ဈေးနှုန်း၊ အရေအတွက်၊ တည်နေရာသတင်းအချက်အလက်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များစသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြားသတင်းအချက်အလက်အတိုကောက်များအပါအ ၀ င်အရာများကိုပါထည့်သွင်းရန်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် Schema သည်သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မြင်သာမှုနှင့်အသုံးပြုသူတစ် ဦး နှိပ်မည်ဆိုပါကသိသိသာသာမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။ မှတဆင့်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုအသုံးပြုသည် OpenGraph ပရိုတိုကော (သေချာတာကတော့သူတို့အတူတူမဖြစ်နိုင်ဘူး)၊ တွစ်တာမှာသင့်ရဲ့တွစ်တာပရိုဖိုင်းကိုသတ်မှတ်ဖို့အတိုအထွာတစ်ခုတောင်ရှိတယ်။ မြှုပ်နှံထားသည့်လင့်ခ်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ထုတ်ဝေစဉ်ကကြိုတင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ပလက်ဖောင်းများသည်ဤ metadata ကိုအသုံးပြုနေသည်။
သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများသည်လူအများဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဖတ်သည့်အခါနားလည်သောအခြေခံအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ထိုစာမျက်နှာများတွင်ဆွေးနွေးနေသောအကြောင်းအရာများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာနားလည်ထားသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၏ HTML သို့အပို tags များထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် -“ ဟေ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၊ ဒီအချက်အလက်ကဒီသီးခြားရုပ်ရှင်၊ နေရာ၊ လူ (သို့) ဗီဒီယို” ဟုပြောသော - သင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်အခြားအပလီကေးရှင်းများကသင်၏အကြောင်းအရာကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးဝင်သော၊ သက်ဆိုင်ရာနည်းဖြင့်ပြသပါ။ Microdata ဆိုတာ HTML5 နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ tags တွေဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Schema.org, MicroData ဆိုတာဘာလဲ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါတွေအားလုံးကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုကျွန်တော်အရမ်းထောက်ခံပါတယ်။ ဥပမာ Facebook ပေါ်မှာ link တစ်ခုမျှဝေတဲ့အခါပုံ၊ ခေါင်းစဉ်ဒါမှမဟုတ်ဖော်ပြချက်မပေါ်လာတဲ့အခါလူအနည်းငယ်ကသာစိတ်ဝင်စားပြီးအမှန်တကယ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ အကယ်၍ သင်၏ Schema အတိုအထွာများသည်စာမျက်နှာတိုင်း၌မရှိပါကသင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်တွေ့နိုင်သေးသည်။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြသသည့်အခါပြိုင်ဘက်များကသင့်ကိုရိုက်နှက်နိုင်သည်။
သင်၏ XML Sitemap များကို Search Console တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုတည်ဆောက်ပြီးပါက၊ သင့်တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုချိတ်ဆက်ပြီး၊ microdata များထုတ်ဝေပြီး၎င်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သောပါဝင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အချက်အလက်အတွက်မှန်ကန်သော XML sitemap ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့် subsistem တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးသည်။
သင်၏ robots.txt ဖိုင်၊ XML sitemaps နှင့်ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်လျှောက်တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းသင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုစီ၏ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲရေးကိရိယာ (ဝဘ်မာစတာကိရိယာဟုလည်းခေါ်သည်) တွင်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်မြင်နိုင်မှုကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည့်မှတ်ပုံတင်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှဆိုဒ်။ သင်၏ Sitemap လမ်းကြောင်းကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှစာရင်းမသွင်းလျှင်ပင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်က၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုနေသည်၊ ပြissuesနာများရှိမရှိ၊ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပြင်ရမည်ကိုပင်သင်ကြည့်နိုင်သည်။
အနီရောင်ကော်ဇောကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများသို့ထုတ်လွှင့်ပါ။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စာမျက်နှာပေါ်ရှိသင့်ရေးသားချက်များသည်ပိုမိုသောကလစ် နှိပ်၍ သင်၏စာမျက်နှာများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပိုမိုမျှဝေသွားသည်။ အားလုံးပြီးသွားပြီ။
Robots.txt, Sitemaps နှင့် MetaData အတူတကွအလုပ်လုပ်ပုံ
ဤအရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင်၏ site အတွက်အနီရောင်ကော်ဇောကိုလှိမ့်ပစ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုမည်သို့ရည်ညွှန်းသည်နှင့်အတူယူသောတွားသွားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဤတွင်ပါ။
သင့်ဆိုဒ်တွင်သင် XML Sitemap တည်နေရာကိုရည်ညွှန်းသည့် robots.txt ဖိုင်ရှိသည်။
သင်၏ CMS သို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးစနစ်က XML Sitemap ကိုမည်သည့်စာမျက်နှာကိုမဆို update လုပ်ပြီးရက်စွဲသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်သည့်နေ့စွဲအချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေသည်။
သင်၏ CMS (သို့) အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးစနစ်ကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးကြောင်းသိစေရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုချည်နှောင်ထားသည်။ သူတို့ကိုတိုက်ရိုက် ping လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် RPC နဲ့ service လိုမျိုးသုံးနိုင်တယ် ပင်းအို-မာတီ သော့ချက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအားလုံးကိုတွန်းရန်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ချက်ချင်းပြန်လာပြီး Robots.txt ဖိုင်ကိုလေးစားသည်၊ စာမျက်နှာအသစ်များသို့မဟုတ်အသစ်တင်ထားသောစာမျက်နှာများကို sitemap မှတစ်ဆင့်ရှာဖွေပြီးနောက်ထိုစာမျက်နှာကိုညွှန်ပြသည်။
သင်၏စာမျက်နှာကိုအညွှန်းကိန်းသောအခါ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ကြွယ်ဝသော snippet microdata ကိုအသုံးပြုသည်။
Tags: ထုံးစံအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဘယ်လိုprotocol ကိုrobots.txt ဖိုင်ကိုschemaရှာဖွေရေး console ကိုSitemap စံXML မြေပုံ
3:2020 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 47
ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုဒ်သည် အကြောင်းအရာအသစ်များကို အညွှန်းမတင်နိုင်တော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ဝဘ်မာစတာပေါ်ရှိ sitemap နှင့် url များကို ရယူသော်လည်း ၎င်းကို မတိုးတက်နိုင်ပါ။ google backend ပြဿနာရှိလား။
3:2020 pm မှာနိုဝင်ဘာ 7, 50
ပုံမှန်မဟုတ်ပါ၊ သင့်ဒိုမိန်းက ဘာလဲ။ သင့်ဆိုဒ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော ကိရိယာအချို့ရှိသည်။